Yaa yiri siyaasiyiintu khubadaha kuma caajisaan kumana hurdoodaan? (Sawiro ) – SBC
Yaa yiri siyaasiyiintu khubadaha kuma caajisaan kumana hurdoodaan? (Sawiro )
Posted by editor on Maarso 14, 2012 Comments
Inta badan marka ay socdaan khudbadaha ama doodaha dhanka siyaasada la xiriira waxaa lagu tirayaa xiliyada ugu xasaasiyada badan qofka siyaasiga ah uuna jecel yahay inuu u dhugyeesho warka la sheegayo si uu uga dhiibto fikirkiisa diimo ama ogolaansho, tiiyoo ay ku sii lamaansan tahay in uu kula socdo jawiga siyaasadeed ee goobta ka jira ee isabadal ama xaalad cusub dhalin kara.
Siyaasiyiintu waxaa kaloo lagu tiriyaa inay ilgaar ah ku eegaan hadba khubdaha socda iyagoo iska ilaaliya in loo hoos galiyo ama ay dhaafto arin ay dood ka qabaan, waase hadii dhuglaanshahaasi uu ka badbaado caajis iyo qalaaqo hurdo oo ka dhalan karta fadhiyada qaar oo si ba’an loogu daaho laguna hurdoodo.
Doodaha aan kululeyn ee qabow isla markaana nacamleyska ah waxaa lagu tiriyaa kuwa ugu badan ee aanay natiijo ka soo bixin oo la ogyahay halka loo socdo ama loo biyo shubanayo, waxaase taasi ku xeeran doodaha kulul oo indhaha la isku shito si ba’anna hadalada la isago soo celiyo kuwaasi oo iskaba daa indhaha la isku qabto oo hurdo la dareemee aad iska ilaalinayso inay kelmad ku dhaafto.
Hogaamiyeyaasha qaar ee khubadaha jeediya ayaa iyagu qudhoodu hadalkoodu kala duwan yahay kuwaa cod kar ah oo qof kasta soo jiidanaya iyagoo leh xaraarad soo jiidasho kuwana iskaba daa inaad dhageysatee waxaaba kugu qabanaysa hurdo iyo hamaansi waxaana ugu wacan cod xumada iyo hadal aqoon la’aanta.
Maarso 14, 2012 at 6:56 pm
SBC WAAN SALAAMAYA LKN WAXA AAN IDIIN SHEEGAYAA IWEBSITE KIINNU INUUSAN WAX JIRA AHAYN EE INTAAD IS LEEDIHII BULSHADA WAX FIICAN GAARSIIYA HANOO SOO GUDBINA WAXA AAN MACNE KU JIRIN RUN AHAATI MAQAALADA NOOCAN OO KALE AH TAAGEERADIINA AYAAD KU LUMINDOONTAAN FADLAN COMMENT GAYGA HA DELETE GARAYNINA HADAAD DIYAAR U TIHIIN INAAD AQBASHAAN DHALIILAHA DADWAYNHU IDIIN SOO JEEDINAYAAN MAHADSANIDIN
Maarso 15, 2012 at 9:23 am
aad baan ugu farxaa marka aan arko qoraallada sida gaarka ah uga sheekeeeynaya dhacdooyinka maalin laha ah ee ka dhaca dunida, kaliya ma xiiseeyo qoraallada la xiriira siyaasadda laakiin waxaa si gaar ah ii cajab galiya maadaama aan dunida kaga noolahay daraf ay adagtahay inaan ka warhyelo dunida geeseheeda kale iyo sida looga noolyahay ama dhacdyooyinka noocan oo kale ah ee ka socda,
si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa SBC Shaqaaleheeda dunida daafeheeda kala duwan ku sugan ee soo tabinaya waxyaalaha qosolka leh ee ay la kulmaaan ama ay ka warhelaan,
Jaamac Jiririco says:
Maarso 14, 2012 at 7:22 pm
asc sbc waa salaamayaa shaqo fiican ayaad inoo haysaan xaqiiqdii waana idin taageersanahay runtii sheekooyinkan waan ka helaa maxaa yeelay mar kasta ma loo baahna siyaasad in laga sheekeeyo in maskaxda la dajiyo oo la iska qosliyo waan qabaa waana ka soo horjeedaa figrada ahmed ee asxaabey sbc sidan noogu soo daaya mahadsanidiin
Maarso 14, 2012 at 8:09 pm
ASC well done good report I like it.
Maarso 15, 2012 at 10:19 am
waa arin layaab leh waxaa kasii yaab badan sbc siday u tahay idaacad aad ulasocota arimaha meel walba ay galaana kadabagasha waana idaacad ay bulshadu umahadiyeen